Ciidamada dowladda Soomaaliya oo magaalada Tiyeeglow kala wareegay Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada dowladda Soomaaliya oo magaalada Tiyeeglow kala wareegay Al-Shabaab
November 14, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Askari ciidamada dowladda Soomaaliya ah oo ku sugan meel kamid ah koonfurta Soomaaliya. [Xuquuqda sawirka: Xinhua News Agency]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay dabada ka riixayaan ciidamada AMISOM ayaa gacanta ku dhigay maanta oo Isniin ah magaalada Tiyeeglow ee gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya, sida ay sheegayaan ilo-wareedyada.
Ilo-wareedyada ayaa sheegaya in ciidamada isgarabsanaya ay la wareegeen magaalada Tiyeeglow iska-caabin la’aan kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada.
Bilowgii bishaan, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa qabsatay magaalada Tiyeeglow kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya oo hoostaga howlgalka AMISOM.
Al-Shabaab ayaa halgan ugu jirta sidii ay awooda uga tuuri lahayd dowladda Muqdisho, dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ayaa socday tan iyo 2006-dii.